Fahasalamana : tena ilaina ny mpanentana eny ifotony | NewsMada
Tanterahina eny Ivato nanomboka omaly ary mitohy anio ny atrikasa iarahana amin’ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana eny ifotony izay tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny fahasalamana eny anivon’ny fiarahamonina hanafainganana ny fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza.
Nisongadina tamin’izany fa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpisehatra ara-pahasalamana eny anivon’ny fiarahamonina amin’ny ady hatao amin’ny fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza, indrindra any amin’ireo distrika lavi-dalana.
Mipaka any amin’ny mponina tena marefo indrindra any amin’ny faritra avaratra andrefana ny asa aton’izy ireo. Iarahana amin’ny USAID amin’ny alalan’ny tetikasa Mahefa no hahafahan’ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana eny ifotony ireo manao ny asany.
Raha ny salanisa, mahatratra 5 hetsy sy 3 tapitrisa ireo mpanentan ara-pahasalamana manerana izao tontolo izao. Mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Miasa ho amin’ny fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza avokoa izy ireny.
Nanohana ny tetikasa ara-pahasalamana teto Madagasikara ny fanjakana amerikanina efa hatramin’ny taona 1993. Mitohy mivoatra hatrany kosa ny fandaharanasa amin’ny alalan’ny tetikasa Mahefa sy Mikolo noho ny vokatry ny fikarohana atao hanatsarana ny fahaiza-manaon’ny mpanentana ara-pahasalamana.
Miara-miasa amin’ny mpanentana ara-pahasalamana maherin’ny 6.000 amin’ny distrika 24 any amin’ny faritra Sava, Diana, Sofia, Boeny, Melaky ary Menabe ny tetikasa Mahefa tohanan’ny USAID.
Efa ho 30 taona mahery izao no nanampian’ny fanjakana amerikanina ny vahoaka malagasy Maherin’ny 80 tapitrisa dolara no natokan’ny sampandraharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana maneran-tany ho fanampiana ny vahoaka malagasy. Hamatsiana tetikasa eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, fampanjariana ara-tsakafo, fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanomezana rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fahadiovana no hampiasana izany volabe izany.